Famintinana ny planina | Reef Resilience
Dingana 7: Mamoròna famintinana ny drafitra
Fotoana izao hijerena ny paikadinao alohan'ny hametrahanao izany. Soraty ny famintinana ireo dingana hitanao hatreto mba hahazoana antoka fa mifampiorina sy / na mifampiarahaba ireo dingana, ary raha misy tsy hita. Ny drafitra an-tsoratra dia hanampy anao hampifantoka ny ezaka ataonao ary hijanona amin'ny làlana mazava ary hanamora ny fampidirana ny hafa amin'ny tetikasanao.
Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamintinana ny famintinanamanokatra fisie PDF nomena mba hisamborana ny fanapaha-kevitrao sy ny antsipiriany voalaza ao amin'ny takelaka tsirairay. Aza adino ny ho fohy - kely kokoa noho izany. Ity dia antontan-taratasy avo lenta natao hanomezana sary an-tsaina ny zavatra tianao hahatratrarana sy ny fomba hahatratraranao azy. Tsarovy izay nianarantsika momba ny herin'ny hafatra tsotra sy mivaingana ary ampiharo izany eto.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny famoronana famintinana ny drafitrao:
Rehefa avy namintina ny drafitrao ianao dia ataovy marim-pototra. Manontania tena hoe:
Ohatra momba ny planina famintinana
Raha mila fanampiana ianao vao manomboka amin'ny drafitr'asa, dia jereo ny famintinana ohatra.
Moa ve ny dingana mikoriana mankany amin'ny drafitr'asa iombonana, ny mifanaraka amin'ny tanjonao dia mifanaraka amin'ny tanjonao, hahatratra ny mpihaino anao ve ny hafatra, ny tanjonao ve hahatonga ny hafatrao ho an'ny mpihaino anao, ary hilaza aminao ve ny fepetra azonao raha miasa ny paikady?
Hita taratra amin'ny feon'ny hafatrao sy ny tetikao ve ny soatoavina / ahiahy sy ny tanjon'ny mpihaino anao? Ohatra, raha matotra ny foto-kevitrao, dia mety tsy mety ny hafatra mampihomehy.
Misy mpiara-miasa vaovao afaka mandray anjara amin'ny tetikasa ve?
Hazava ve ny dingana manaraka anao?
Iza no mila mijery sy mankasitraka ny drafitrao?
Inona avy ireo loharano ilainao hahazoana antoka ny fampiharana ny drafitrao?